कथा : श्यामनाथ शहिद ! | KTM Khabar
कथा : श्यामनाथ शहिद !
२०७३ जेष्ठ ८ गते ११:१८ मा प्रकाशित
“तपाई हामीलाई छोरा दिनुस् हामी त्यसलाई रोजगार दिन्छौ।” पराग र गुटखाले कुहिएको दाँत देखाएर लामो हाँसो हाँस्यो शेषमान । जवाफमा फिस्स मुस्काइन रिता । शेषमानले बुझे यो मौन स्वीकृति हो । आफुसंगैका साथीहरुको भिड देखेपछी राघव उत्साहित भयो । त्यसमाथि पनि पैसा आउने, यसैपनी काम थिएन् । दिनभरी डुल्यो, भुल्यो, हो –हल्ला गर्यो । त्यहाँ पनि त हल्ला नै गर्ने त हो । राघव भित्र पस्यो “छिटो तयार होउ,” शेषमान हतारियो या त्यहाँ धेरै बेर बस्न चाहेन । “नाति एक गिलास पानी लेउ बा” टेलिभिजनबाट नजर हटाएर श्यामनाथ बोले ।
“हतार छ बा, ममिलाई भन्नुस् न” राघव बाहिरियो । “पानी लिनुस्” रिता कोठाभित्र पसिन्, “नाति कहाँ जान लाग्यो बारु” “पार्टीको प्रचार प्रसारमा जान्छ अरे, पैसा पनि आउँदो रहेछ । यसैपनि आवारा केटो टाइमपास हुन्छ उसलाई ।” “शेषमान पखपख” श्यामनाथ बाहिर निस्किए, “नमस्कार बा” उनले हात जोडेनन् वा जोड्न सकेनन् । मुखले नमस्कार फर्काए । लाठीमा आफ्नो शरीरको बोझ पारेर श्यामनाथ आँगनको छेउमा घामनिर बसे, “कति पैसा आउछ रु” शेषमान उनको नजिकै सरे “अरुलाई त त्यस्तै हो, राघवलाई भने दिनको हजार दिउँला ।”
श्यामनाथले ओठ लेप्राए, “कसले दिन्छ तलाई यत्रो पैसा, दुनियाँलाई बाड्नरु” “कार्यलयबाट आउँछ बा ढुक्क हुनुस् ।” शेषमान श्यामनाथलाई कुरा बुझाउनतिर लागे । श्यामनाथले सम्झिए अस्ति बम पड्किएको ,”हुदैन नाति जाँदैन ।” शेषमान उजाडिए “किन र बा, अरुलाई भन्दा उसलाई बढी पैसा दिएकै छौू, यहाँ भन्दा के गर्न सक्छुर मैले ।” “बम पड्किएको पड्कै छ । केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ रु” शेषमान तर्सिए उनी सम्हालिदै बोले, “होइन बा ती सब विपाक्षीहरुको चाल हो।” शेषमान अकमकिए उनी श्यामनाथलाई आस्वस्थ पार्न चाहन्थे ।
“देशको लागि जिउ ज्यानको बाजी लगाउन सक्नुपर्छ बा, अनिमात्र देशको सच्चा नागरिक भाईन्छ ।” उनी अरु थप्दै थिए, “देशको लागि मरियो भने इतिहासमा नाम त लेखिन्छ । भन्ने गर्छन् नि कि गर कि मर ।” शेषमान रोकिए । श्यामनाथ चुप रहे उनको मनमा बिगत घुम्न थाल्यो । यसैपनि उनले देशको निम्ती केही गरेका थिएनन । जती बाँचे आफ्नै लागि बाँचे । आफ्नै परिवारलाई बचाए, आफ्नै पेट भरे । उनलाई लाग्यो यो देशको लागि महान काम हुन सक्छ । उनले बुझ्न सकेनन् कि शेषमान राजनीती गर्दै छ । उसले जे भन्यो, जे सम्झायो त्यो सब स्वार्थ सिवाए अरु होइन ।
“शेषमान, आजसम्म देशको लागि मैले केही गरिन । उमेरले पनि चार बिस नाघिसके मलाई पनी लैजाओ तिमीहरुको कार्यक्रममा ।” शेषमान गद् गद् भए, “आर्याघाट जानेबेलामा ठिकै छ । देख्नेलाई पनि मज्जा आओस् कि यस्तो बुढा त पार्टी प्रचारमा छ । हामी किन कानमा तेल हालेर बसेका छौ ।” शेषमान हौसिए बुढालाई र्यालिको अगाडिपट्टी राखियो । पचास, साठी जनाको टोली एक पंंक्ती भएर बुढाको पछी लागे । पत्रकारहरुले फोटो खिचे, समाचार बनाए । दुईओटा चोक घुमेर शेषमानको पार्टी तेस्रो चोक तर्फ लाग्दै थियो । अगाडि आर्को पाटिको जमातसँग शेषमानको पार्टीको भेट भयो । “हुररर।।।। ओइे हेर्न पिण्ड खाने बेलामा चुनावी प्रचार गर्न हिंडेछ ।” एक हुल केटाहरु रवाफले हाँसे । श्यामनाथ झस्किए “हिड्दा हिड्दै मर्छ बुढो अर्को बोल्यो,” हाँसो गुन्जियो । शेषमानका केटाहरु जँगिए “ओइे मा...। हेप्छस्।” शेषमान तर्सियो कतै केटाहरु झगडा गर्ने त होइनन् । उनि सतर्क भए ।
श्यामनाथ नहडबडाइकन अगाडि बढे, “मा...।।ओई ठोक” शेषमानका केटाहरु जाइलागे । तातो रगत उम्लिहाल्यो , “हान हान” आर्को पाटिका केटाहरु प्रतिकारमा उत्रिए । भिड बड्न थाल्यो , शेषमान अगाडि पर्न चाहेनन । श्यामनाथ भिड्भन्दा पर सर्दै थिए । उनको रफ्तारलाई केटाहरुको झडपले भेटिहाल्यो । उनि जमिन मा पछारिए । उमेरले असी काटेका श्यामनाथ चिच्याउन सकेनन् । न त सके उठ्नलाई नै । सयौँ केटाहरु उनलाई जमिन बनाएर नाँचे । उनि कतिन्जेल बाँचे कसैले पत्तो पाएन । एक हूल पुलिस आइपुग्यो भिड तित्तर बित्तर भयो । श्यामनाथको निस्प्राण शरीरलाई हस्पिटल पुर्याइयो । हस्पिटलमा उनलाई मृत घोषित गरियो । राघव टाउको को चोटले हस्पिटल भर्ना भयो । रिता विह्वल भइन , ससुराको काजक्रियाले राघवलाई भेट्न सम्म पाइनन । शेषमानले फर्किएर पनि राघवको आँगनमा टेक्ने शाहस गर्न सकेन । भोलिपल्ट सुनियो श्यामनाथलाई शहिद घोषणा गर्नको लागि आन्दोलन चल्दै छ । चोकमा शेषमानका कार्यकर्ताहरु आन्दोलन गर्दै छन । आज नेपाल बन्द अरे, सडकमा सवारी साधानहरु ठप्प छन् ।
पत्रिकामा श्यामनाथका फोटाहरु छापिएका छन् । “आफ्नो जीवन राजनीतिमा समर्पण” “देशको निम्ती हाँसी हाँसी मृत्यु रोजे ।” आदि आदि हेडलाईनहरु विभिन्न पत्रिकाले छापे । अर्को दिन पत्रिकामा श्यामनाथको बारेमा लेख आयो । जसमा लेखिएको थियो “श्यामनाथ बिस बर्षको उमेरदेखी राजनीतिमा लागेका थिए । उनले अनबरत रुपमा आफ्नो जीवन राजनीतीमा होमे । जसको लागि घरपरिवर भनेनन् । बाल्याकाल सुखमय भएपनी उहाँको युवावस्था नाजुक थियो । उनी पैसाको पछि दगुरेनन् । धनलाई हातको मैलेसँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो उहाँ । नेपाली राजनीतीका महान हस्ति स्वर्गिय श्यामनाथको नेपाली राजनीतीमा अतुलनिय योगदान रहेको छ । उहाँको निधनसंगै नेपाली राजनीतीको एक युग समाप्त भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो पहिला जनतालाई खुवाउ, अन्त्यमा आफू खाउ । कति महान हुनुहुन्थ्यो उहाँ । आफ्नो सारा जीवन राजनीतिमा लगाउँदा लगाउदै गतिहिन हुनुभयो । तीन दशक राजनीतीमा बिताउनु भएका श्यामनाथप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ । उहाँको अभाव सदा देशलाई खड्किने छ । उहाँको नाम राजनीतीको अग्रपंतिमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ।”